at 10:59 PM Labels: အထွေထွေ
အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတာရယ်၊ အလုပ်များနေလို့ ပုံတွေပဲ တင်ထားနှင့်ပါတယ်။ မကြာခင် ပို့စ်တင်ပေးပါမယ်နော်။
မကြာခင်လာမည်မျှော်... menu ပေါ့။
Shinlay June 23, 2009 at 1:14 AM
လုလု June 24, 2009 at 7:54 PM
မျှော်တဲ့လူ လည်ပင်းမရှည်ရအောင် လာပါပြီနော်။ :)
Unknown July 8, 2009 at 10:43 AM
Thank you very much. That blog is very support for us.
Unknown July 8, 2009 at 10:44 AM
by the way i want to know how to search myanmar font
I can't typ myanmar font